सिलवालले ट्वीटरमा आईएम रेडी लेखेपछि…. – Saurahaonline.com
सिलवालले ट्वीटरमा आईएम रेडी लेखेपछि….
काठमाडौँ, २४ पुस । नवनिर्वाचित सांसद तथा नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआइजी नवराज सिलवालले आफु चुनौतीका लािग तयार रहेको उल्लेख गरेका छन् । आज ट्वीटरमा लेख्दै आफूमाथि आइपरेको चुनौती सामानाका लागि तयार भएको आशय प्रकट गरेका हुन् ।
सोमबार बिहान एक ट्वीट गर्दै सिलवालले लेखेका छन्, प्रिय २०१७ सबै पाठका लागि धन्यवाद, प्रिय २०१८ म तयार छु ।’
काठमाडौँ प्रहरी परिसरले केही दिन अघि ललितपुरलाई पत्र लेख्दै सिलवाललाई बयानका लागि उपस्थित गराउनलाई भनेको थियो । प्रहरीको टोली सिलवालको घरमा पुगे पनि त्यसअघि नै उनी मलेसिया पुगिसकेका थिए । त्यसता सिलवालको प्रहरीले व्यापक खोजी गरिरहेको जनाएको छ ।
अति गोप्य रहने डिआइजीहरुको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले यस विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । अनुसन्धानका लागि सहयोग गर्न भन्दै प्रहरीले तीन अनलाइनका सम्पादकविरुद्ध पक्राउ पूर्जी समेत जारी गरेको छ ।